Socialism – Biographien Projekt
Translation by Nyein Chan May
သခင်စိုးသည် ဒို့ဗမာ အစည်းအရုံးနှင့်၊ (၁၉၃၀) ပြည့်လွန်နှစ်များမှ (၁၉၄၈) ခုနှစ် နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရခင်အထိ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲ၀င်ခဲ့သည့် ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်ကြီးတို့တွင် လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံးအဖွဲ့၀င်များအနက် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သခင်စိုးသည် ဦးအောင်ဆန်းနှင့် ဦးနုတို့ကဲ့သို့ တက္ကသိုလ် မတက်ခဲ့ချေ။ သို့ရာတွင် နိုင်ငံရေးထဲသို့ မ၀င်ရောက်မီ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ဆိုရှယ်လစ်အတွေးအခေါ်များကို အလွန်စွဲလန်းနှစ်ခြိုက်ခဲ့သည်ဖြစ်ရာ၊ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်၊ ကွန်မြူနစ်စနစ်တို့ကို ပိုမိုများပြားကျယ်ပြန့်သည့် လူထုပရိသတ်ထံ မိတ်ဆက်ပေးသည့် စာအုပ်များ၊ ဆောင်းပါးများကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးသားခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်မူ အစိုးရကို ဆန့်ကျင်သည့် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတစ်ရပ်ကို အစပြုခဲ့သည့်၊ သေးငယ်သည့် ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ခေါင်းဆောင်သူ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ (၁၉၈၈) ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာနှင့် လူထုစိတ်၀င်စားမှုအပြောင်းအလဲကြောင့် သခင်စိုး၏ အရောင်စုံလင်လှသည့် ဘ၀နှင့် စရိုက်တို့မှာ လျစ်လျှူရှုခံလိုက်ရသည်။ သို့သော်လည်း သခင်စိုး၏ ဘ၀နှင့် စရိုက်တို့မှာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၏ အဓိကအကြောင်းအရာများအပေါ် အလင်းပြလျက်ရှိသည်။
သခင်စိုးကို ယနေ့ မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက္ခမီမြို့ (ဗြိတိသျှခေတ်က Amherst ဟု ခေါ်တွင်သည့်) အနီးရှိ၊ ကျောက်တန်းရွာ၌၊ (၁၉၀၅)(၁) ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ (၁၉၂၂) ခုနှစ်မှ (၁၉၃၇) ခုနှစ်အထိ၊ Burmah Oil Company ၏ ဓာတ်ခွဲခန်းအကူအဖြစ် ရန်ကုန်မြို့အနီး၊ သန်လျင်မြို့ (ဗြိတိသျှခေတ်က Syriam ဟု ခေါ်) ရှိ လောင်စာဆီချက်စက်ရုံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူသည် စိတ်အားထက်သန်လှသည့် စာဖတ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ ထိုစဥ်က မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ တရစပ်စိမ့်၀င်လျက်ရှိသည့် ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒအကြောင်းစာအုပ်များကို အထူးတလည် စိတ်၀င်တစားရှိလှသည်။
(၁၉၃၈)ခုနှစ် ဇွန်လတွင် သူရေးသားသည့် “ဆိုရှယ်လစ်၀ါဒ” စာအုပ်ကို နဂါးနီစာအုပ်အသင်းမှ ထုတ်၀ေသည်။ ယင်း နဂါးနီစာအုပ်အသင်းကို သခင်စိုးက သခင်သန်းထွန်း၊ သခင်နုတို့နှင့်အတူ တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်သန်းထွန်းက အဆိုပါစာအုပ်တွင် စကားချီးရေးပေးသည်။ သခင်စိုးအနေဖြင့် လောင်စာဆီကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်မလုပ်တော့သည့်အခါ၊ သခင်နုက သူ့အား ရံဖန်ရံခါ ထောက်ပံ့ပေးသည်။ (၁၉၃၈)ခုနှစ်၊ သန်လျင်ရေနံမြေလုပ်သားများ သပိတ်တွင် အရေးပါသည့်နေရာမှ ပါ၀င်ခဲ့ပြီး၊ သခင် လှုပ်ရှားမှု၏ အဖွဲ့၀င်၊ ဒို့ဗမာ အစည်းအရုံး၏ ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့၀င်တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အစည်းအရုံး၏ အသိဉာဏ်ပံ့ပိုးရာဌာနဖြစ်သည့် စာအုပ်အသင်းတွင် ဂုဏ်ထူးဆောင်အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
(၁၉၃၉)ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် သခင်စိုးသည် သခင်သန်းထွန်း၊ သခင်အောင်ဆန်းတို့နှင့်အတူ၊ လူအင်အား ၁၂ ဦး၊ ၁၃ ဦးခန့် ပါ၀င်သည့် ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီတစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ၄င်းကို ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ် မှတ်ယူကြသည်။ တစ်နှစ်အကြာတွင် သခင်စိုးသည် အခြားသော သခင်များကဲ့သို့ပင် ဗြိတိသျှတို့၏ ထောင်သွင်းအကျဥ်းချခြင်းကို ခံရသည်။ အကြောင်းမှာ ဥရောပတိုက်ရှိ ဖက်ဆစ်အင်အားစုများအား ဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်ရာတွင် မြန်မာက ဥရောပဘက်က ထောက်ခံအားပေးခဲ့ရာ၊ အပြန်အလှန်အားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးကို ဗြိတိသျှတို့က ကတိပေးရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ကတိပြုရန် ပျက်ကွက်သည့်အတွက် လှုပ်ရှားတောင်းဆိုမှုဖြစ်လာခဲ့သည်။ (၁၉၄၂)ခုနှစ် ဂျပန်တပ်များ ၀င်ရောက်လာချိန်၌ အကျဥ်းကျရာမှ လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီး၊ သခင်အောင်ဆန်း၊ သခင်နု၊ သခင်သန်းထွန်းတို့နှင့်အတူ ဂျပန်တို့နှင့် မပူးပေါင်းဘဲ၊ ဧရာ၀တီဒေသမြစ်၀ကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် ဂျပန်တို့ကို ဆန့်ကျင်သည့် မြေအောက်တော်လှန်ရေးလုပ်ဆောင်ရန် ထွက်သွားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က သခင်စိုးသည် သခင်သိန်းဖေမှ တဆင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဗြိတိသျှအာဏာပိုင်များနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့သည်။ သခင်သိန်းဖေသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသွားသည့် ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဘက်တွင် ဂျပန်တို့က မြန်မာနိုင်ငံကို (၁၉၄၃)ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် လွတ်လပ်ရေးပေးမည်ဟု အာမခံခဲ့သည့်အတွက်၊ အခြားသခင်များက ဂျပန်တို့ သတ်မှတ်ပုံစံချပေးသည့် မြန်မာအစိုးရထဲတွင် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည်။
(၁၉၄၃)ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် သခင်စိုးသည် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည်။ (၁၉၄၄)ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးအသင်း၊ နောက်ပိုင်းတွင် ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးနှင့် ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် (ဖဆပလ) ဟု ခေါ်တွင်သည့် ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးတပ်ဦး တစ်ရပ်ကို တည်ထောင်ရန်၊ မြန်မာ့တပ်မတော်၊ ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် ဆိုရှယ်လစ်အင်အားစုများက သခင်စိုး၏ ဌာနချုပ်တွင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ကြပြီး၊ မကြာမီအချိန်အတွင်းမှာပင် ရန်ကုန်မြို့၌ စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ သခင်စိုးကို နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်၊ သခင်အောင်ဆန်းက စစ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် သခင်စိုးက မြစ်၀ကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် စစ်သားများ၏ နိုင်ငံရေးသဘောထားကို ကွပ်ကဲကြီးကြပ်ရသည့် နိုင်ငံရေးအကြံပေးတစ်ဦးဖြစ်သည့် နေ၀င်းနှင့် အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
မတ်လတွင် အောင်ဆန်းဦးဆောင်သော ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ အကူအညီဖြင့်၊ မဟာမိတ်များ စစ်ပွဲကို အောင်နိုင်ပြီးသည့်၊ (၁၉၄၅)ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ရန်ကုန်မြို့၌ အောင်ပွဲခံခဲ့သည်။ ထို့နောက် တစ်လအကြာတွင် သခင်စိုးအနေဖြင့် ကွန်မြူနစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနေရာကို လက်လွှတ်လိုက်ရသော်လည်း၊ ဗဟိုကော်မတီ၀င်တစ်ဦးအဖြစ် ဆက်ရှိနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ မိန်းမလိုက်စားခြင်းနှင့် အရက်သေစာသောက်စားမူးယစ်သည်ဟူသည့် စွပ်စွဲချက်တို့က သူ့ရာထူးကို လက်လွတ်ဆုံးရှုံးစေခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှကွန်မြူနစ်တစ်ဦး၏ အကူအညီဖြင့် သခင်စိုးသည် တော်၀င်လေတပ်ပိုင်လေယာဥ်ကို စီးကာ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ပြီး၊ အိန္ဒိယကွန်မြူနစ်များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အိန္ဒိယမှ ပြန်ရောက်လာချိန်တွင် ဗြိတိသျှတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမှန်သမျှ မှားယွင်းကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကို ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှ လွတ်မြောက်စေရန် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတစ်ရပ်ကို ဆင်နွှဲရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြင်းထန်စွာ ယုံကြည်ခဲ့သည်။(၂) ပါတီကို သူတစ်ဦးတည်း ဦးဆောင်ရန်ဆန္ဒနှင့် ပတ်သက်ပြီး၊ အချိန်ရှည်ကြာစွာ ငြင်းခုန်ဆွေးနွေးပြီးနောက်၊ သခင်စိုးသည် အခြားသော ဗဟိုကော်မတီ၀င် ခုနစ်ဦးနှင့်အတူ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကို စွန့်ခွာခဲ့ပြီး၊ အလံနီကွန်မြူနစ်ပါတီဟု အမည်တွင်သည့် ကွန်မြူနစ်ပါတီ (ဗမာပြည်)ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သခင်သန်းထွန်း၏ ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ အလံဖြူကွန်မြူနစ်များဖြစ်သည့်အတွက်၊ ပါတီအလံ၏ အဓိကအရောင်မှာ အနီရောင်ဖြစ်သည်။
သခင်စိုး၏ ပါတီသစ်ကို (၁၉၄၆) ဇူလိုင်လတွင် ဗြိတိသျှအစိုးရက မတရားအသင်းကြေညာပြီးနောက်၊ ပါတီမှာ မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုအသွင် ပြောင်းသွားသည်။ သခင်စိုးက ဦးအောင်ဆန်း (၁၉၄၇ ဇူလိုင်လတွင် လုပ်ကြံခြင်းမခံရမီအချိန်အထိ အုပ်ချုပ်ခဲ့)၊ ဦးနု (၁၉၄၇ မှ ၁၉၅၈၊ ၁၉၆၀ မှ ၁၉၆၂ အထိ အုပ်ချုပ်ခဲ့)၊ နေ၀င်း (၁၉၅၈ မှ ၁၉၆၀၊ ၁၉၆၀ မှ ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ခဲ့) တို့ ဦးဆောင်သည့် အစိုးရများကို (၁၉၇၀)ပြည့်နှစ်အထိ လက်နက်ကိုင်ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။(၃) ပါတီ၏ တော်လှန်ရေးက မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက်ဘက်ဒေသ (ပခုက္ကူ၊ နောက်ပိုင်းတွင် ရခိုင်နှင့် ဧရာ၀တီမြစ်၀ကျွန်းပေါ်ဒေသ) တွင် တည်ထားပြီး၊ သူ၏ အလွန်အမင်းအာဏာရှင်ဆန်လှသော အုပ်ချုပ်မှုကြောင့် နောက်လိုက်နောက်ပါများ တဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းလာခဲ့သည်။ (၁၉၇၀) ပြည့်နှစ်တွင် သခင်စိုးက သူ၏ ပဉ္စမမြောက်ဇနီး၊ မွေးကင်းစသားနှင့် နောက်လိုက်နောက်ပါ (၃၀)တို့နှင့်အတူ လက်နက်ချခဲ့သည်။ (၁၉၇၂)ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်မှုဖြင့် စွဲချက်တင်ခံရပြီး၊ (၁၉၇၃)ခုနှစ်တွင် သေဒဏ်ပေးခံရသည်။ အယူခံ၀င်မှုများနှင့် အသနားခံမှုများအကြိမ်ကြိမ်ပယ်ချခံရသော်လည်း၊ ကြိုးစင်ပေါ် မတက်ခဲ့ရချေ။ (၁၉၈၀)ပြည့်နှစ်တွင် ယခင်က သူ၏ ရန်သူတော်ဖြစ်သည့် ဦးနုနှင့်အတူ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိပြီး၊ နိုင်ငံတော်ပင်စင်စားခဲ့ရသည်။ (၁၉၈၈)ခုနှစ် အရေးတော်ပုံတွင် သေးငယ်သည့် အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်တွင်သာ ပါ၀င်ခဲ့ပြီး၊ (၁၉၈၈)ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် တည်ထောင်သည့် ပါတီများအနက် ပါတီတစ်ခု၏ နာယကဖြစ်လာခဲ့သည်။ (၁၉၈၉)ခုနှစ် မေလ (၆)ရက်နေ့တွင် ကွယ်လွန်သည်။
၃။ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ ရရှိအောင်မြင်ခဲ့သည်များနှင့် ပင်ကိုယ်အရည်အသွေး
သခင်စိုးသည် အသက် (၃၇)နှစ်အရွယ်၊ (၁၉၄၂)ခုနှစ်မှ စကာ အစိုးရအရပ်ရပ်ကို အနှစ် (၃၀)နီးပါး မြေအောက်တော်လှန်ရေး ဆင်နွှဲခဲ့သည်။ ဒီမတိုင်ခင် အနည်းဆုံး စာအုပ်သုံးအုပ်(၄) နှင့် စာစောင်အတော်များများရေးသားခဲ့သည့်အတွက် ကွန်မြူနစ်ဆရာကြီးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလက်ခံထားကြသည်။ သူ့ရဲဘော်ရဲဘက်၊ နောက်ပိုင်းတွင် ယှဥ်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာသည့် သခင်သန်းထွန်းသည် သခင်စိုးအနေဖြင့် ဆိုရှယ်လစ်၀ါဒအကြောင်း စာအုပ်ရေးသားရာတွင် “ကောင်းမွန်ချောမွေ့သည့် မြန်မာစာ“ဖြင့် ရေးသားရန် ကူညီပေးခဲ့သည်။ သူက သခင်စိုးထက်စာလျှင် ပါတီကို ကောင်းမွန်စွာ စည်းရုံးနိုင်သည့် စည်းရုံးရေးမှူး၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းသူ၊ သခင်စိုး၏ သေးငယ်သည့် အဖွဲ့ထက်စာလျှင် အစိုးရကို ပိုမိုကြီးမားစွာ ခြိမ်းခြောက်နိုင်သည့် အဖွဲ့ဖြစ်လာခဲ့သည်။(၅) သခင်စိုး ရေးသားခဲ့သည့် ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒအကြောင်း စာအုပ်မှအပ သူ့အရေးအသားများနှင့် မိန့်ခွန်းများကို နိုင်ငံခြားဘာသာသို့ ပြန်ဆိုထားခြင်း မရှိပါချေ။ ထို့ကြောင့် “သူကိုယ်တိုင်ပြောဆိုခဲ့သည်“များကို ကောက်နုတ်ပြီး၊ သူ၏ နိုင်ငံရေးအမြင်၊ ရည်မှန်းချက်များကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ကြည့်နိုင်ခြင်းကား မဖြစ်နိုင်ပါ။
သခင်အောင်ဆန်း၊ သခင်သန်းထွန်းနှင့် အခြားသော မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် တော်လှန်တိုက်ပွဲ၀င်ကြသူများကဲ့သို့ပင် သခင်စိုးသည်လည်း သူ့ကိုယ်ပိုင်နည်းနာဖြင့် „နိုင်ငံရေးသတ္တဝါ“ ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ အကျဥ်းထောင်မှ လွတ်မြောက်ပြီးနောက်၊ အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် သူ့ကိုယ်သူ ,,ကျွမ်းကျင်တော်လှန်ရေးသမား“ ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ သူ့နောက်လိုက်နောက်ပါများအား သူ့အယူအဆသီအိုရီများ ရှင်းပြခြင်းဖြင့် သူ့ကိုယ်သူ ,,မြန်မာပြည်၏ ကားလ်မက်စ်“ ဟု မှတ်ယူထားသည်။ သူစာအုပ်ထဲတွင် ကားလ်မက်စ်ကို ကောက်နုတ်ကာ ,,ဤအလုပ်အတွက် ကျွန်ုပ်၏ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာခြင်း၊ မိသားစုဘဝနှင့် အရာအားလုံးကို ပေးဆပ်ထားပါသည်။“ (စိုး၊ သခင်။ ၁၉၃၈၊ ၅၄) ဟု ရေးသားထားသည်။ စာအုပ်ရေးသားနေစဥ် သူ့ဘ၀ကို သူ့ဆရာ၏ ဘ၀နှင့် နှိုင်းယှဥ်ခဲ့ဟန်တူသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် သူ့ကိုယ်သူ လီနင်နှင့် နှိုင်းယှဥ်ချင်လာဟန်တူသည်။ သူ့ ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိတွင် အချို့သော သူ့ဘဝဖြစ်စဥ်များကို ကားလ်မက်စ်ရေးသားသည့် အရင်းကျမ်း ,,Das Kapital“ ထဲမှ ရှည်ရှည်လျားလျားကောက်နုတ်ချက်များဖြင့် မှတ်ချက်ပြုထားသည်။ ထို့ပြင် သူမွေးဖွားစဥ်က သမိုင်းတွင် ကြီးကျယ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လာမည်ကို ပြသည့် နိမိတ်ထူးတစ်ရပ် ရှိခဲ့ကြောင်း သခင်စိုးက ရေးသားခဲ့သည်။ (Taylor 2008: 11) တော်လှန်ရေးကာလအတွင်း အပေးအယူပြု ညှိနှိုင်းခြင်းများမရှိခဲ့ဘဲ၊ သူ့နောက်လိုက်နောက်ပါများ၏ လေးစားမှုကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ သူကိုယ်တိုင် ချမှတ်ခဲ့သည် တင်းကြပ်လှသည့် ပါတီစည်းမျဥ်းများကို လိုက်နာနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ,,တော်လှန်ပုန်ကန်ခြင်းအတတ်“တွင် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတစ်ရပ်ကို မရှိမဖြစ်လိုအပ်ခြင်းက ပဓာနကျသည် ဟူသည့် မာ့က်စ်ဝါဒ သင်ကြားပို့ချချက်ကို ယုံကြည်ကြသည့် အခြားတော်လှန်ရေးသမားများကဲ့သို့သော ကံကြမ္မာ သခင်စိုးတွင် မရှိနေခြင်းက မှတ်သားလောက်ဖွယ်ဖြစ်သည်။ သူသည် သခင်သန်းထွန်းကဲ့သို့ ,,တော်လှန်ရေးက ဝါးမျိုခံရသည်“ မဟုတ်။ သခင်သန်းထွန်းသည် တရုတ်ယဥ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေး နိုးထလာသည့်အချိန်၊ ပါတီတွင်း အာဏာသိမ်းမှုများကို ဦးဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်၊ (၁၉၆၈)ခုနှစ်တွင် နောက်လိုက်တစ်ဦး၏ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံးတွင် သခင်စိုးအနေဖြင့် မာ့က်စ်နှင့် အဲန်ဂယ်လ်တို့ထံမှ သူ့သင်ခန်းစာကို တကယ်အတည်ရသွားခဲ့ဟန်တူသည်။ ယင်းသင်ခန်းစာမှာ အရင်းရှင်ဝါဒကို ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒဖြင့် အစားထိုးပြီး လူထုက အလုံးစုံလွတ်လပ်ရေးရမည့်နေ့ကို မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ ခန့်မှန်းနိုင်ခြင်းမရှိ ဟူသည်။ (စိုး၊ သခင်။ ၁၉၃၈၊ ၈၄) သူ့အနေဖြင့် အစိုးရကို လက်နက်ချရခြင်းမှာ တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုကျဆုံးခြင်း၊ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာခြင်း၊ နောက်ဆုံးဇနီးနှင့် အသက် (၆၄)နှစ်အရွယ်မှ ရလာသည့် မွေးကင်းစသားငယ်ကို ဂရုစိုက်လိုခြင်း စသည့် စိတ်ပျက်အားငယ်ဖွယ်ရာ အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်သည်။ တရားစီရင်စဥ်ကာလအတွင်း သူ့နောက်လိုက်ငယ်သားများ ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို တာ၀န်ယူရန် အမျိုးမျိုး ကြိုးစားငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး၊ နေ၀င်း ဦးဆောင်သည့် တော်လှန်ရေးကောင်စီ၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို ထောက်ခံကြောင်း အလေးထားပြောဆိုခဲ့သည်။
သခင်စိုးတွင် အမျိုးစုံလင်သည့် ပင်ကိုအရည်အသွေးများ ရှိသည်ကား သိသာလှသည်။ (၁၉၃၀)ပြည့်နှစ်တွင် ရေးသားစပ်ဆိုသည့် ဒို့ဗမာ သီချင်းကို စိတ်အားထက်သန်ပြင်းပြစွာ သီဆိုခဲ့သည့် အဆိုရှင်အဖြစ် သူ့ကို လူသိကြသည်။ အဆိုပါ သီချင်းကို မြန်မာနိုင်ငံတော်သီချင်းအဖြစ် နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံပွဲများနှင့် အခြားပွဲအခမ်းအနားများတွင် ပရိသတ်ကို ရိုးရာဂီတသံဖြင့် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သည်။ ထို့အပြင် သခင်စိုးက တယောလည်းထိုးသည်။
သူ၏ အကောင်းအဆိုးဒွန်တွဲနေသည့် စရိုက်ကို ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဂျပန်တို့ကို တော်လှန်နေသည့်အချိန်အတွင်း နာမည်ကျော်သည့် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်က ပုံဖော်နိုင်ပါသည်။ ထိုစဥ်အချိန်က ဧရာ၀တီမြစ်၀ကျွန်းပေါ်ဒေသရှိ တော်လှန်ရေးဌာနချုပ်များပေါ်သို့ လေထီးခုန်ချမည့် သူ့ရဲမေများအတွက် နိုင်လွန်ပိတ်နှင့် နှုတ်ခမ်းနီများ မှာယူခဲ့သည်။ ယင်းအပြုအမူမှာ သူ့ရဲမေများအပေါ် ကြင်နာသနားတတ်သည့် အပြုအမူအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်သည် (မောင်မောင်၊ ဒေါက်တာ။ ၁၉၅၉၊ ၆၅) သို့သော် တော်လှန်ရေးတပ်များကို အမိန့်ပေးသည့် နေ၀င်းက သခင်စိုးအား စစ်ကို ကစားခဲ့မှုအတွက် အပြစ်ဖော်ကြိမ်းမောင်းခဲ့သည်။
သခင်စိုးသည် လွှမ်းမိုးမှုရှိသည့် နိုင်ငံရေးရာထူးမျိုး မရဖူးခဲ့ချေ။ သို့သော်ငြားလည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခေတ်သစ်သမိုင်းကြောင်းတွင်မူ ကြီးမားသည့် သက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းရာတွင် သူ့ကဏ္ဍမှာ အတိမ်းအစောင်းမခံဖြစ်လှသည်။ နိုင်ငံတွင်း ကျူးကျော်လာသူ ဂျပန်များနှင့် သခင်အုပ်စုတို့၏ တရားဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် နိုင်ငံကို ပြန်လည်သိမ်းယူရန် ကြိုးပမ်းမှုများအတွက် နိုင်ငံတွင်းမှ ထောက်ခံမှုလိုအပ်သည့် ဗြိတိသျှတို့အကြား နူးညံ့သိမ်မွေ့လှသည့် မျှခြေကို ဖန်တီးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သခင်စိုးသည် စစ်အတွင်း မြန်မာပြည်တွင် ,,ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး“ လှုပ်ရှားမှုအတွက် ရှင်းလင်းပြတ်သားသည် တစ်ဦးတည်းသော နာမည်ကျော်ကြားသည့် သခင် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် (၁၉၄၆)ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ကြေညာထုတ်ပြန်သည့် ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ်ကြီး၏ ပထမဆုံး ကြေညာချက်တွင် လူအများယုံကြည်စိတ်ချမှုကို စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ ,,ဖက်ဆစ်ဂျပန်များကို နှင်ထုတ်ရေး“ ခေါင်းစဥ်ပါ တင်နိုင်ခဲ့သည်။ အနာဂတ်နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းများ ပါ၀င်နေသည့်၊ နိုင်ငံအဝှမ်း ဖြန့်ချိခဲ့သည့် ကြေညာစာတမ်းကို ရေးသားရာတွင်လည်း သခင်စိုးက ထဲထဲ၀င်၀င် ပါ၀င်ခဲ့ကြောင်း ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။
ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ နိုင်ငံ၏ သမိုင်းကို လွှမ်းမိုးခဲ့သည့် ဆိုရှယ်လစ်နှင့် ကွန်မြူနစ်စနစ်တို့ကို မြန်မာ့နည်း၊ မြန်မာ့ဟန် နားလည်မှုကို ပုံဖော်ရာတွင် သခင်စိုး၏ သြဇာကား အရေးပါလှပါသည်။ ရောဘတ်တေလာ မှတ်သားထားသည်မှာ။ ။
ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ပေါ်ထွက်လာပြီး ဆယ်နှစ်အကြာ၊ (၁၉၄၈)ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၄)ရက်နေ့ အာရုဏ်တက်ချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည်။ ထိုစဥ်အချိန်က နိုင်ငံတွင်းရှိ အပြောကောင်း၊ အဟောကောင်းနိုင်ငံရေးမှန်သမျှ၊ မျိုးချစ်မှန်သမျှကား ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒီ၊ မာ့က်စ်ဝါဒီ သို့မဟုတ် ကွန်မြူနစ်ဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ (တေလာ၊ ၂၀၀၈၊ ၆)
သခင်စိုး၏ လက်ရာကား ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်များ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒကို နားလည်နိုင်စေရန်၊ မာ့က်စ်ဝါဒသုံးစကားများကို ဗုဒ္ဓအတွေးအခေါ်နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ရှင်းပြနိုင်ခဲ့ရုံတင် မကပါ။ သူ့အနေဖြင့် ထွက်ပြေးပုန်းလျှိုနေရစဥ် (၁၉၆၀)နှင့် (၁၉၇၀)ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်ပင် သူ့စာအုပ်ကို အဘယ်ကြောင့် ရိုက်နှိပ်ထုတ်၀ေနိုင်နေရဆဲဖြစ်သနည်းဆိုသည်ကိုပါ ရှင်းပြနိုင်ပါသည်။ သခင်စိုး၏ တပည့်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ချစ်လှိုင်က အခြားကျောင်းသားတစ်ဦးနှင့်အတူပေါင်းကာ သခင်စိုး၏ ချဥ်းကပ်နည်းကို ယူပြီး ,,လူနှင့် သူ့ပတ်၀န်းကျင်အကြားအပြန်အလှန်ဆက်နွှယ်မှု“ဆိုသည့် ဗမာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဥ်ပါတီ၏ အတွေးအခေါ်ကို ရေးဆွဲခဲ့သည်။(၆) အချို့က သခင်စိုး၏ သြဇာမှာ ပါတီအုပ်ချုပ်မှုကို ကျော်လွန်ကာ ခြေဆန့်ခဲ့သည်ဟု စောဒကတက်နိုင်ပါသည်။ ချစ်လှိုင်၏ တပည့်တစ်ဦးမှာ စစ်တက္ကသိုလ်ရှိ သန်းရွှေ ဖြစ်သည်။ ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ်ကြီးကို တည်ထောင်ရာတွင် ပါ၀င်သည့် ဦးဆောင်အဖွဲ့၀င်ဖြစ်သည့် စစ်တပ်အနေဖြင့် လက်သင့်ခံနိုင်မည့် ဒီမိုကရေစီစနစ်မျိုးထံသို့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို ဦးတည်မောင်းနှင်ရာတွင် အခရာကျသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ပင် ဖြစ်သည်။ သန်းရွှေက သူ့ဆရာ ချစ်လှိုင်ကို မမေ့ခဲ့ပါချေ။ ချစ်လှိုင် မျက်စိကွယ်သွားသောအခါ သူ့ကျန်းမာရေးကို ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခဲ့သည်။
သခင်စိုး၏ နောက်ဆုံးနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုမှာ (၁၉၈၈)ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် တိုးတက်ရေးပါတီ၏ ရာထူးနေရာကို ရယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းပါတီမှာ (၁၉၉၀)ပြည့်လွန်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် (၃၆၅၆)မဲသာ ရခဲ့သည်။ သခင်စိုး၏ နောက်ဆုံးနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ သူလုပ်ခဲ့သည့် အမှားမျိုး ထပ်မကျူးလွန်မိစေရန်နှင့် စစ်တပ်နှင့် ပူးတွဲအလုပ်လုပ်ရန် အသိသတိပေးစာတစ်စောင်ကို (၁၉၈၉)ခုနှစ်တွင် ရေးသားခဲ့ခြင်းလည်း ပါ၀င်သည်။ (တေလာ။ ၂၀၀၈၊ ၁၁)
မှတ်ချက်။ ။ ဤစာ၏ အဓိက ကျမ်းကိုးသည် (၁၉၈၉) ခုနှစ်တွင် ဂျာမန်ဘာသာစကားဖြင့် ထုတ်၀ေသည့် ကလောက်စ် ဖလိုက်ရှ်မန်း (Klaus Fleischmann) ၏ စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်၏ အကိုးအကားများကို စာထဲတွင် မဖော်ပြထားပါ။ ဖလိုက်ရှ်မန်းက (၁၉၈၀)ပြည့်နှစ်၊ သခင်စိုး ထောင်ကလွတ်လာချိန်တွင် အင်တာဗျူးခဲ့သည်။ သခင်စိုးအကြောင်း ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် သူ့အမွေအနှစ်ကို ဆေးရောင်စုံခြယ်သနိုင်ရန်၊ မြန်မာလိုထပ်မံရရှိနိုင်သေးသည့် ကျမ်းကိုးများ ရှိနေဦးမည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။
ချစ်လှိုင်၊ ၂၀၀၈။ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဥ်ပါတီတွင် ကျွန်ုပ်၏ ပါ၀င်ပတ်သက်မှုအကြောင်း တစေ့တစောင်း။ ဟန်းစ်ဘန့်စ်ဆော်လ်နား (Hans-Bernd Zöllner) တည်းဖြတ် ၂၀၀၈ ခုနှစ်။ သခင်စိုး၊ ဆိုရှယ်လစ်၀ါဒနှင့် ချစ်လှိုင် အမှတ်တရများ။ မြန်မာစာပေစီမံကိန်း၊ အတွဲ (၁၀)၊ ပါ့ဆောင်းမြို့ (Passau)၊ Lehrstuhl für Südostasienkunde: 114-162. (http://www.burmalibrary.org/docs11/mlp10.10-op.pdf).
ဖလိုက်ရှ်မန်း၊ ကလောက်စ် ၁၉၈၉ (Fleischmann, Klaus) ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ အစကနဦးမှ လက်ရှိအချိန်ထိ ဟမ်းဘွတ်မြို့ (Hamburg)၊ အာရှအင်စတီကျု။
ဖလိုက်ရှ်မန်း၊ ကလောက်စ် ၁၉၈၉ (Fleischmann, Klaus) မြန်မာပြည်ရှိ ကွန်မြူနစ်ဝါဒအကြောင်း စာရွက်စာတမ်းများ၊ ၁၉၄၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၇ ခုနှစ်အထိ။ ဟမ်းဘွတ်မြို့ (Hamburg)၊ အာရှအင်စတီကျု။
လင့်ထ်နာ၊ ဘာတီးလ် ၁၉၉၀။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ နေထွက်ချိန်နှင့် နေ၀င်ချိန် အီသီကာ၊ နယူးယောက်။ အရှေ့တောင်အာရှအစီအစဥ်၊ ကော်နဲလ်တက္ကသိုလ်
စိုး၊ သခင် ၁၉၃၈။ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ ဟန်းစ်ဘန့်စ်ဆော်လ်နား (Hans-Bernd Zöllner) (ထုတ်၀ေ) ၂၀၀၈၊ သခင်စိုး၊ ဆိုရှယ်လစ်၀ါဒနှင့် ချစ်လှိုင် အမှတ်တရများ။ မြန်မာစာပေစီမံကိန်း၊ အတွဲ (၁၀)၊ ပါ့ဆောင်းမြို့ (Passau)၊ Lehrstuhl für Südostasienkunde: 17-106 (http://www.burmalibrary.org/docs11/mlp10.10-op.pdf).
တေလာ၊ ရောဘတ် ၂၀၀၈။ မိတ်ဆက် ။ ဟန်းစ်ဘန့်စ်ဆော်လ်နား (Hans-Bernd Zöllner) (တည်းဖြတ်) ၂၀၀၈၊ သခင်စိုး၊ ဆိုရှယ်လစ်၀ါဒနှင့် ချစ်လှိုင် အမှတ်တရများ။ မြန်မာစာပေစီမံကိန်း၊ အတွဲ (၁၀)၊ ပါ့ဆောင်းမြို့ (Passau)၊ Lehrstuhl für Südostasienkunde: 5-13 (http://www.burmalibrary.org/docs11/mlp10.10-op.pdf).
Who’s Who in Burma 1961 ရန်ကုန်၊ ပြည်သူ့စာပေရေးရာကော်မတီ
(၁) Who’s Who in Burma, 1961 (ပြည်သူ့စာပေရေးရာကော်မတီ)။ စာ-၁၅၆။ ၀ီကီပိဒီယက သူ့မွေးသက္ကရာဇ်ကို ၁၉၀၆ ခုဟုလည်း ပြထားသည်။
(၂) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ခေါင်းဆောင် Browderist ကို အစွဲပြုမှည့်ခေါ်ထားသည့် Browderist လမ်းစဥ်။ အယူဝါဒအရ အယူအဆမတူသူ ရန်သူများနှင့် ခေတ္တခဏပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းသည့် တိုးတက်မှုများ ဖြစ်စေသည့် လမ်းစဥ်။ ထိုလမ်းစဥ်ကို သခင်စိုးက ငြင်းဆိုသည်။
(၃) ဦးနုအစိုးရက သခင်စိုးကို အသေရရ၊ အရှင်ရရ ဆုတော်ငွေ တစ်ထောင်ကျပ် ထုပ်ခဲ့သည်။ ထိုစဥ်က အင်မတန်များပြားလှသည့် ငွေပမာဏဖြစ်သည်။ (Who’s Wo in Burma 1961: 156).
(၄) ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ (၁၉၃၈)၊ ဗမာ့တော်လှန်ရေး (၁၉၃၉)၊ အလုပ်သမားတို့ ကမ္ဘာ (၁၉၄၀)။ ပထမစာအုပ်ကို နဂါးနီစာအုပ်အသင်းက ထုတ်၀ေပြီး၊ နောက်စာအုပ်နှစ်အုပ်ကို နဂါးနီစာအုပ်အသင်း ပူးတွဲတည်ထောင်သူ ဦးထွန်းအေးက (၁၉၃၉)ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်သည့် မြန်မာစာအုပ်တိုက်က ထုတ်၀ေသည်။ ဦးထွန်းအေးသည် သခင်စိုးနှင့် သခင်သန်းထွန်းတို့ကဲ့သို့ပင် ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို စွဲမြဲယုံကြည်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ စာအုပ်တိုက်တွင် ပါဝင်သော ဦးနု၏ ရှယ်ယာများကို အသုံးပြုရခြင်းသည် အရင်းရှင်ဆန်လွန်းသည်ဟု ထင်မြင်သဖြင့် စာအုပ်တိုက်မှ ထွက်ခဲ့သည်။
(၅) (၁၉၇၁)ခုနှစ် စီအိုင်အေ မှတ်တမ်းတွင် သူ၏ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှာ အဖွဲ့ဝင် ၂၀၀၊ ၃၀၀ ထက်မပိုကြောင်း ခန့်မှန်းပြထားသည်။ (https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/esau-52.pdf: 2)(၆) ချစ်လှိုင်။ ၂၀၀၈၊ ၁၂၄
Autor Rodion EbbighausenVeröffentlicht am 26. April 2020 27. April 2020 Kategorien Communism, Politics, SocialismSchreibe einen Kommentar zu သခင်စိုး (၁၉၀၅ – ၁၉၈၉)
Chit Hlaing (1926-2018) – A Pioneer of Burmese Socialism
Burmese Translation of this article
Socialism is dead in Myanmar. Whoever wants to meet socialists in the country today, has to payavisit to the headquarters of the National Unity Party in Yangon’s Bahan Township.
There, aroundadusty yard withaflagpole, are some wooden barracks in which the party leadership defends what is left of socialism.
Party members include older men such as U Khin Maung Gyi, former Minister of Commerce under Ne Win andaleading member of the Burma Socialist Program Party (BSPP). When the Burmese’s journey toward socialism ended in 1988, the BSPP was also dissolved. The term „socialism“ vanished more and more from the political landscape.
U Khin Maung Gyi lost his post, his party and for the moment his political home. But in the 1990 elections, the socialists had regrouped in the NUP. The NUP was founded on October 12, 1988. Chit Hlaing, the theorist of Burmese socialism, became part of the Central Executive Committee. Therefore, the NUP can be seen as the direct successor party of the BSPP.
The NUP regards itself, as the former Minister of Trade explained during our meeting in 2013, asaparty that is left of the center. Despite abandoning the planned economy model, the party in principle adheres to the socialist tradition of the BSPP. In 2013, U Khin Maung Gyi was still optimistic about the future. He hoped to score victory in the 2015 general elections and enter all the parliaments. But things didn’t turn out that way. In 2015, the NUP won only one seat in the House of Nationalities. Socialism in Myanmar and its last adherents will most likely disappear in the coming years. For most people, particularly the younger generations, socialism today is synonymous with an obsolete failed ideology.
Socialist and communist ideas have playedamajor role since Myanmar’s independence movement of the 1930s and 40s. The independence hero Aung San himself wasafounding member of the nation’s first communist cell. His speeches and writings are full of socialist ideas and Marxist terminology.
Chit Hlaings Early Years
One of the most important thought leaders of the second generation of Burmese socialists was U Chit Hlaing. He was born on March 15, 1926, in the district of Katha. Katha is located on the upper reaches of the Irrawaddy in the Sagaing region. The just 16-year-old high school student joined the Burma Independence Army (BIA) in 1942 to fight against British colonial rule. After the expulsion of the British by the Japanese and reorganization of the BIA into the Burma Defense Army (BDA), he receivedasix-month officer training. During the occupation of Burma by the Japanese, he held the rank of sergeant.
In addition to his military education, Chit Hlaing, asateenager, encountered communism and Marxism-Leninism. Asamember of the Nagani Book Club, he also studied writings on left leaning nationalism. Chit Hlaing himself admitted that he was hugely influenced by Thakin Soe, who published the book Socialism in 1939, in which he first published texts by Marx, Engels, Lenin and others in Burmese language. Another influential figure was the socialist Thakin Tin Mya. Through his teachers, Chit Hlaing becameasupporter of communism, joined the Burma Communist Party (BCP) and promoted communist cell members within the army.
At the start of his career, Chit Hlaing was in three camps, which would later go on to become bitter enemies. First, he was in the military, which cooperated with the Japanese under the leadership of Aung San. Second, he was among the communists, whose more radical representatives rejected cooperation with the Japanese military government. Third, he maintained good relations to Thakin Tin Mya’s socialists.
That he eventually opted for the camp of Aung San and his Anti-Fascist People’s Freedom League (AFPFL) rather than the Red Flag Communists of his teacher Thakin Soe may be due toapersonal encounter with Aung San, whose charisma and pragmatism had held the independence movement together for years. After meeting Aung San sometime between 1942 and 1943, when Chit Hlaing worked as the messenger between Aung San, Thakhin Soe, and other communist leaders, Chit Hlaing had to correct his ideas: „I had thought he wasafanatic militarist. Now I could believe he wasademocrat. I had thought he was an enemy of Marxism. Now I respected him asabona fide and true socialist.”
When Aung San broke with the communists in 1946, Chit Hlaing renounced – at least verbally – the communists who had committed themselves toaglobal revolution under the leadership of the Soviet Union. Within the AFPFL, he becameamember of the Socialist Party (SP). He bet on socialist evolution instead of communist revolution. In his own words, he exchanged the red forapink ideology. Together with like-minded people, he founded the People’s Literature Company, in which he translated numerous texts of figures like Marx and Mao, which he also commented on under the pseudonym Maung Chit Gyi (later he used the pen name Ko Ko Maung Gyi).
In August 1951, Chit Hlaing traveled to East Berlin as an AFPFL representative for an international youth congress. The congress’ sponsor was the Soviet Union. He then hoped to continue his studies in the Soviet Union, but Htun Shein,amember of the Burmese Communist Party (BCP), opposed Chit Hlaing’s attempt. One reason might have been that Chit Hlaing lacked genuine communist conviction. Finally, Chit Hlaing didn’t get the permission by the Communist Party of the Soviet Union (CPSU). Instead of Moscow, he landed in Paris, where he lived until 1955 and studied philosophy. According to his own account, Chit Hlaing largely renounced political activity during his time in Paris, fearing that he would attract the attention of the secret police and possibly lose access to French universities.
At the same time, he came into contact with new socialist ideas. Throughafriend he became aware of the special path taken by Yugoslavia under Marshal Tito. The communist Tito had defied Stalin in 1948, without joining the Western camp during the Cold War. Instead, he wasaleading representative of the Non-Aligned Movement, founded in 1961 in Belgrade. The Non-Aligned Movement and its predecessor the Bandung-States of 1955 have been well received in Burma. The example of Tito showed that there was not just orthodox communism, and that the Marxist-Leninism of the Soviet Union could be criticized.
With this new perspective, Chit Hlaing returned to Burma in 1955 against his will and at the request of Colonel Aung Gyi. Colonel Aung Gyi was one of the most important figures in post-colonial Burma. Together with Maung Maung he held the reins of leadership within the Tatmadaw in the 1950s.
On the request of Colonel Aung Gyi, Chit Hlaing becameamember of the Directorate of Psychological Warfare (DPW), whose central tasks included the drafting ofamilitary doctrine and anti-communist propaganda. The objectives should be achieved by training the officer corps, producing propaganda material such as pamphlets, radio broadcasts, etc.
One of the first key documents Chit Hlaing wrote in his new role for the Tatmadaw under the guidance of Maung Maung was titled The National Ideology and the Role of the Defense Services. The document defined the relationship between Tatmadaw and politics. Task of the Tatmadaw is the defense of the state ideology. The state ideology, in turn, formulated the goals of peace, the rule of law, democracy andasocialist economic system.
In addition to working for The National Ideology, Chit Hlaing wasadiligent writer in the military-published magazine Myawaddy , which appeared since 1952 and hadacirculation of 18,000 copies in 1956. In his articles, Chit Hlaing criticized Stalinism, the Communist Party of Burma (BCP) and developed the outlines of his own political philosophy namarupa wada. To do so, Chit Hlaing used traditional Buddhist terms and tried to give themadifferent or new meaning. Given the lack of not yet existing terms for core concepts of Marxism and Socialismanatural approach (Thakin Soe’s approach was quite similar).
Namarupa isacomposite of the Pali terms namà and rupà. Namà stands for psychic in the broadest sense, rupá for physical. Chit Hlaing uses the word pair inavariation on „consciousness“ and „matter.“
Wada, on the other hand, indicates that the phrase is an -ism (as in communism, capitalism). Namarupa is therefore an abstraction.
In Chit Hlaying’s conception, Namarupa Wada was to layaphilosophical foundation forafuture socialist state. His hope was to promote the unity of the country by mixing Marx’s materialism with Buddhist elements so that the new ideology would be acceptable to Buddhists as well. Namarupa Wada was decidedly anti-communist and nationalist. From the perspective of Western philosophy, Chit Hlaing’s philosophical concept was abstract and overly complex;apaper overloaded with jargon and ambiguous Pali terms, as Nakanishi criticizes.
At the end of 1957, Chit Hlaing took onaposition asalecturer in political thought at the Directorate of Psychological Warfare. He summarized his articles and his ideology in the handbook Ideology Critical for the Development of Human Nature and Democracy. These theoretical writings were, however, only ever known toahandful of officers or intellectuals.
In the power struggles of the subsequent years, which fell in the same time period as the splitting of the AFPFL in 1957, within the Tatmadaw, the Socialists prevailed against the rather moderate representatives Aung Gyi and Maung Maung. However, Chit Hlaing played onlyaminor role in all of this. His big moment came only in March 1962 with the coup and the establishment of the Revolutionary Council (RC).
The new rulers lackedapolitical ideology. Ne Win quickly roped in Chit Hlaing and two of his comrades to work out the new ideology. Chit Hlaing was one of the few in the ranks of the military who had the necessary knowledge and writing skills. The ideology should also give the RC legitimacy. Ne Win called for an ideological superstructure that emphasized the special status of Burma and held the country in equidistance to the political blocs of the Cold War.
That’s how Chit Hlaing got the opportunity to write the policy declaration for the RC (The Burmese Way to Socialism) and later the official ideology of the BSPP (The System of Correlation between Man and His Environment). In formulating the two ideological key texts of the Ne Win era, Chit Hlaing essentially drew on his preparatory work of the 1950s.
When reading the texts, the mixture of Marxist terminology and theory with Buddhist beliefs and Pali vocabulary is striking. The System followsastep-by-step approach: First, the construction of nature is determined, then the nature of man, and finally, society.
The basic program begins withadescription of the three worlds that make up nature asawhole: the material world, the living world, and finally what the text describes as phenomena. Phenomena are the processes and interactions between mind and matter. Chit Hlaing uses terms from the Buddhist tradition to define the three worlds. He uses terms like okasaloka (material world), sattaloka (animal world), „Law of Impermanence“ or the „Wheel of Change.“
Then man is identified as the crown of creation, the first mover and the measure of all things: „Man matters most.“ Man creates and transforms the social system, since he is an image of all three worlds. Man is finally defined asasocial animal that knows both selfishness and altruism and shapes society.
In the section on the formation and laws of society, Chit Hlaing increasingly uses Marxist terminology. Capitalism is criticized, it is about productive forces and the laws of dialectical materialism, but without the use of this term. Chit Hlaing speaks of the dialectical method or the dialectical law that he defines with the Pali term Paticccsamuppada (the conditionality of all beings). The revolution also occurs. At the end of this section, he defines the philosophical program of the BSPP and six economic laws for the Burmese way to socialism.
It concludes withareflection on the determining role of the workers in the new Burma and the role of the party or its behavior in its own ideology, which was expected to be neither complete nor conclusive with this program. The text outlinesakind ofaBuddist-socialist utopia. Both texts were submitted to the RC. He let them pass without extensive changes.
The impact of the two policy texts is difficult to assess, but it was probably not very large, although Chit Hlaing, in retrospect, judges that the day the RC adopted The System was crucial to the country: „To my mind, April 25, 1962 wasalandmark,amajor turning point in the political history of Burma.“
That the influence was not very large is due to the abstract nature of Chit Hlaing’s remarks. Even Colonel Khin Nyo, who was training at the DPW, said of the philosophical foundations of Burmese socialism: „As for me, I must admit, I cannot understand how or why mind and matter are related to politics.” When even an insider couldn’t understand the connections, it is to be assumed that the general population, to whom the text of The System was broadcast via radio on January 17, 1963, would not have become much wiser by it. Maybe it was not about the content, as Nakanishi suspects. „The establishment ofastate ideology is more significant than its content.“
Former President Dr. Ba Maw publishedacommentary in the British newspaper The Guardian on January 23, 1963, in which he rubs his finger on the wound: „Basically, the [Revolutionary] Council has done the right thing. But what, as I see it, is wrong about this is that the common error has been repeated of confusing race with religion and religion with society, and so turning religio-metaphysical speculations into social truths and laws. In this way,asocial philosophy based upon laws and conditions which are continually changing has been kept tied to religious dogmas which claim to be absolute and unchanging and go centuries back to an age immeasurably different from today.“ A problem which is virulent down to the present day.
The fundamental texts of the socialist era are hardly comprehensible and often operate with contradictory concepts and ideas. One major issue is the fact that ideology and religion are different. Nevertheless, Chit Hlaing tried to reconcile incommensurate thoughts, religious beliefs and terms on the one hand, and ideology on the other, but Marxism and Buddhism have no common denominator. In the end, nothing remains but an accumulation of supposedly profound concepts that stand side by side withoutamental connection.
The conceptual blurring of the basic program does not provideacomprehensive explanation for the collapse of socialism in Myanmar; but it is at least an indication that there wasalack of clarity and consistency even at the beginning of the social experiment.
The elaboration of the socialist principles was the culmination and at the same time the last highlight in Chit Hlaing’s career. He was no longer responsible for translating his theory into concrete politics. The next eight years Chit Hlaing spent asalecturer for party cadres, before he left the BSPP in 1970 and retired in 1971.
He became once again member ofapolitical party after the National Unity Party (NUP) in 1988 was formed to replace the BSPP in the next elections. But his role in post-88 Burma was that ofacommentator and well respected intellectual and not that of an influential politician. He died of natural causes on March 26, 2018 in Yangon General Hospital – aged 92.
Overall, Chit Hlaing can be said to have been an influential theorist but notadoer. Insofar perhaps it is not entirely wrong what he says about himself: „On my part, I had only to accept the duty entrusted upon me.“
However, it should be remembered that Chit Hlaing educated and trained generations of officers, some of whom later went on to even become ministers or in the case of Than Shwe heads of state. Although socialism in Myanmar has been discredited asapolitical ideology and within the party landscape since 1988, Chit Hlaing’s philosophical ideas continue to thrive in the minds of Myanmar’s elites and military.
 Quoted from Nakanishi (2013), 64 f.
 In terms of content and form, The National Ideology remained very close to the constitution of 1947. Yoshihiro Nakanishi sees in the document, contrary to the prevailing interpretation, less the claim of the military to dominate the political agenda of the country (Nakanishis 2013, p. 76). It’s more of an attempt to createaloyal, united and centralized military. At that time, Chit Hlaing argued that officers of the army should engage in politics but stay as far removed from party politics as possible. The slogan of the military was understood to be something like: understand politics but don’t engage in politics.
 Nakanishi (2013), 80.
 Walton (2017), 27.
 Nakanishi (2013), 84.
 Working Paper 10, 146.
 Working Paper 10, 153.
 Nakanishi (2013), 96.
 The Guardian, 23 January 1963; quoters after Nakanishi (2013), 62 f.
 See Obituary: „Obituary: Junta Insider Dies at 92“, The Irrawaddy, March 26, 2018, https://www.irrawaddy.com/news/burma/obituary-junta-insider-dies-92.html. Accessed October 23, 2018.
 Working Paper 10, 125.
Callahan, Mary P. 2003 Making enemies. War and state building in Burma. Ithaca [et.al.]: Cornell University Press, 2003.
Chit Hlaing 1963 The System of Correlation of Man and his Environment. The Philosophy of the Burma Socialist Programme Party.
Nakanishi, Yoshihiro 2013 Strong Soldiers, Failed Revolution. The State and Military in Burma. Singapore: NUS Press.
Taylor, Robert H. 2015 General Ne Win. A Political Biography. Singapore ISEAS.
Walton, Matthew J. 2017 Buddhism, Politics and Political Thought in Myanmar. Cambridge: Cambridge University Press.
Zöllner, Hans-Bernd (Hrsg.) 2008 Myanmar literature project. Working paper number 10:10. Soe, Socialism and Chit Hlaing, Memories. Introduction by Robert H. Taylor.
Autor Rodion EbbighausenVeröffentlicht am 27. Dezember 2018 13. April 2020 Kategorien Communism, Politics, Socialism, TatmadawSchreibe einen Kommentar zu Chit Hlaing (1926-2018) – A Pioneer of Burmese Socialism
Burmese version of this article
Thakin Soe was one of the most influential members of the Dobama Asiayone and the AFPFL in the fight for Burma’s independence from the late 1930s until the country’s independence in 1948. Unlike Aung San and Nu, he did not attend university but worked inacompany before he got involved in politics. Being very much attracted by socialist ideas, he wrote books and articles in Burmese that introduced Socialism and Communism toawider audience. Later, he was the leader ofasmall communist party that started an armed rebellion against the government. His colourful life and character have been widely neglected due to the shift of public and academic interest on Burma after 1988. They, however, shed light on some core elements of Burmese politics.
2 Biographical Scetch
Soe was born in 1905 in Kyauktan,avillage near Kyaikkami – known as Amherst in English – in today’s Mon State. From 1922 to 1937 he was employed by the Burmah Oil Company as laboratory assistant in the oil refinery in Thanlyin (Syriam) near Yangon. He was an avid reader, particularly interested in books on socialism that were pouring into Burma at that time.
Title of „Socialism“ – The slogan on the red area means „May the revolution be victorious“
In June 1938 his book „Socialism“ (literally translated: “Socialist ideology”) was published by the Nagani („Red Dragon”) Book Club that he had co-founded together with Than Tun and Nu. Than Tun wrote the foreword. After he stopped working at the oil company, Nu supported him for some time. In 1938, he playedarole in the strike of the workers on the oil fields and in Thanlyin, becameamember of the Thakin movement, the Do-bama Asiayone andamember of its Central Committee, and worked as an honorary secretary at the book club, the intellectual centre of the association.
In August 1939, he was – together with Than Tun and Aung San – one of the 12 or 13 people who foundedacommunist party cell that later was regarded as the foundation of the Communist Party of Burma (CPB). One year later, he was – as many other Thakins – imprisoned by the British because of the agitation against the refusal of the British to promise Burma’s independence in return to the Burmese support of the war against the European Fascist powers. He was freed when the Japanese entered Burma in 1942, but unlike Aung San, Nu and Than Tun, went underground in the Irrawaddy Delta to fight the Japanese instead of initially cooperating with them. At that time, he communicated both with the British authorities in India through Thein Pe, another communist leader, who had left Burma for India. Meanwhile, most Thakins served in the Burmese government that had been set up after Japan had nominally granted independence to Burma in August 1943.
In December 1943, Soe was elected General Secretary of the Communist Party of Burma. In August 1944, the foundation ofapopular front against the Japanese named Anti-Fascist Organisation (AFO), later renamed the Anti-Fascist People’s Freedom League (AFPFL) comprising of the Burmese army as well as the communist party and an emerging socialist group was discussed at Thakin Soe’s headquarters and shortly afterwards was formally enacted in Rangoon. Soe was regarded as the political leader whereas Aung San was in charge of the army. He then cooperated with Ne Win who commanded an army unit in the delta asa„political advisor“ looking after the correct political attitude of the soldiers.
After the victory of the Allies in the last months of the war with assistance of the Burmese army which Aung San had led in revolt agains the Japanes in March, and celebrated in Rangoon in June 1945, Soe lost his post as General Secretary of the communist party one month later but remainedamember of the Central Committee. Accusations of his weakness for women and inclination to alcohol contributed to losing his post. With the assistance ofaBritish Communist he then travelled to India in the plane of the Royal Air Force and had talks with Indian Communists. After his return, he was strongly convinced that any cooperation with the British was wrong and an armed revolution to liberate Burma immediately from British rule had to be started. Afteralong debate in the party over Soe’s demand to lead the party alone, he left the CPB with seven other members of the Central Committee and formed the Communist Party (Burma) called Red Flag Communist Party. The main colour of its flag was red whereas that of the “White Flag Communists” under Than Tun’s leadership was white.
The new party was declared illegal in July 1946 by the British government and went underground. Soe continued an armed struggle against the governments led by Aung San (until his assassination in July 1947), Nu (1947-1958; 1960-1962) and Ne Win (1958-1960; from 1962 on) until 1970. The rebellion of his party concentrated on the western part of Burma (Pakokku and later Rakhine and parts of the Irrawaddy Delta and was characterised byaconstant decrease of followers due to his extremely authoritarian style of leadership. In 1970 he surrendered together with his fifth wife, his newly born son and 30 followers. He was tried for high treason in 1972, receivedadeath sentence in 1973. His appeals and calls for pardon were rejected, but he was not executed. He was released in 1980 in course of an amnesty and – together with Nu, his former enemy – and receivedastate pension afterwards. In 1988 he playedaminor role in the popular uprising by becoming patron of one of the parties founded after the military coup of September 1988. He died on May 6, 1989.
3 Aims, Achievements and Personality
Soe lived an underground life fighting different governments from 1942 when he was 37 years old for almost 30 years. Before that, he wrote at least three books and many pamphlets and was therefore regarded as the communist sayagyi – great teacher. His comrade and later rival Than Tun who had helped him to write his book on socialism in “good Burmese” in contrast excelled as organiser and party manager and becameamuch greater threat to the government than Thakin Soe’s small group. Almost nothing however is known inaforeign language about his writings and speeches except the translation of his book on socialism. His visions and political goals therefore up to now cannot be directly reconstructed by quoting him „in his own voice“.
Like Aung San, Than Tun and many other Burmese revolutionaries fighting for independence, Soe wasa„political animal“ in his own right. He called himselfa“professional revolutionary” in an interviews after his release. He might have regarded himself asa„Burmese Karl Marx“ by explaining his theory to his fellow countryman. In his book, he quotes Marx: „To devote myself to this work, I have sacrificed my well-being, my family life and everything.“ (Soe 1938: 54) At the time of writing his book, he might have compared his life to that of his teacher. Later, he might have been inclined to compare himself with Lenin. In his autobiography, he commented on particular events happening during his life with lengthy excerpt from Marx’s Das Kapital. And he reported that at his birthaspecial omen had happened indicating that Soe was to becomeagreat historic figure. (Taylor 2008: 11) During his revolutionary struggle, he did not compromise and lost the sympathies of many of his followers because he himself did not abide by the strict rules of party discipline that he had issued.
It is notable, however, that Soe did not share the fate of many other fighters who believed in the Marxist doctrine that the necessity of an armed struggle wasacore element of the „science of revolution“. He was not „eaten by the revolution“ like Than Tun who was killed in 1968 byafollower after he himself had organised purges of the party in the wake of the Chinese Cultural Revolution. Soe finally might have taken his lessons drawn from Marx and Engels seriously that nobody could predict the day when the complete liberation of people after the replacement of capitalism by socialism was achieved. (Soe 1938: 84). His surrender to the government wasamix of frustration about the failure of his revolutionary movement, old age and care for his last wife and his newborn son he had fathered at the age of 64. During his trial, he tried everything to reject the responsibility for atrocities committed by his followers and stressed his sympathy with the aims of the Revolutionary Council headed by Ne Win.
It seems quite clear that Soe wasacomplex personality. He was known to beagood singer who fervently sung the Dobama song composed in 1930 – still Myanmar’s national anthem – at political gatherings and on other occasions entertained audiences with traditional songs. Furthermore, he played the violin.
The ambivalence of his character can be illustrated by the famous story that during his resistance activities against the Japanese in World War II he ordered lipsticks and nylons for his female followers to be parachuted down to the resistance headquarters in the Irrawaddy Delta. This could be regarded asakind gesture to his female followers (Maung Maung 1959: 65) but Ne Win who commanded the troops of the resistance unit reprimanded Soe for playing war.
Takhin Soe never held an influential political post. Nevertheless he hadagreat impact on the course of Myanmar ’s modern history. His role in the independence struggle during World War II was crucial for creatingadelicate balance between the official cooperation of the Thakins with the Japanese intruders and the British who needed local support for their attempts to recapture the country. Furthermore, Soe had been the only prominent Thakin with clear „anti-fascist“ activities during the war within Myanmar and thus provided credibility to the first declaration of the AFPFL issued in August 1946 and entitled „Drive Away the Fascist Japanese Marauders“. It can be safely assumed that Soe was heavily involved in drafting the manifesto that included the guidelines ofafuture constitution and was distributed around the whole country.
At least equally important is Soe’s impact on shaping the Burmese understanding of socialism and communism that dominated the country’s history for many decates. As Robert Taylor notes:
Ten years after Socialism appeared, Myanmar received its independence before dawn on4January 1948. By then almost every articulate politician and nationalist in the country claimed to beasocialist, Marxist, or communist. (Taylor 2008: 6)
Soe’s work had not just explained socialism inaway that could be understood by Buddhists by linking Marxist dialectics with Buddhist philosophy. This explains why the book was reprinted in Myanmar in the 1960s and 1970s even atatime when the author still lived in his hideouts. One of Soe’s students, Chit Hlaing together with another student drafted the Philosophy of the Burma Socialist Programme Party „The Correlation Between Man and His Environment“ that took up Soe’s approach, One may argue that Soe’s influence even extended beyond the end of the party’s rule. One of the students of Chit Hlaing at the military academy was Than Shwe who was instrumental in directing Myanmar’s politics towardsakind of democracy acceptable to the army, the leading founding member of the AFPFL. He did not forget his teacher but cared for his health when Chit Hlaing became blind.
His last political activity after accepting the post of the Unity and Development Party in September 1988 that got just 3.656 votes in the 1990 elections wasaletter to Aung San Suu Kyi written in 1989 in which he warned her not to repeat his own mistake and try to work with the army (Taylor 2008: 11).
Note: The main source of this text is Klaus Fleischmann’s book published in German in 1989. References to this book are not given in the text. Fleischmann interviewed Soe after his release in 1980. It can be assumed that there are many more sources available in Myanmar that can help to paintaclearer picture of Soe and his legacy.
Chit Hlaing 2008 A Short Note on My Involvement in the Burma Socialist Programme Party. Hans-Bernd Zöllner (ed.) 2008 Thakin Soe, Socialism and Chit Hlaing, Memories. Myanmar Literature Project vol. 10. Passau, Lehrstuhl für Südostasienkunde: 114-162. (http://www.burmalibrary.org/docs11/mlp10.10-op.pdf).
Fleischmann, Klaus 1989. Die kommunistische Partei Birmas. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Hamburg, Institut für Asienkunde.
Fleischmann, Klaus 1989. Documents on Communism in Burma, 1945-1977. Hamburg, Institut für Asienkunde.
Lintner, Bertil 1990. The Rise and the Fall of the Communist Party in Burma. Ithaca, N.Y : Southeast Asia Program, Cornell University
Soe (Thakin) 1938 Socialism. Hans-Bernd Zöllner (Hrsg.) 2008 Thakin Soe, Socialism and Chit Hlaing, Memories. Myanmar Literature Project vol. 10. Passau, Lehrstuhl für Südostasienkunde: 17-106 (http://www.burmalibrary.org/docs11/mlp10.10-op.pdf).
Taylor, Robert 2008. Introduction. Hans-Bernd Zöllner (ed.) 2008 Thakin Soe, Socialism and Chit Hlaing, Memories. Myanmar Literature Project vol. 10. Passau, Lehrstuhl für Südostasienkunde:: 5-13. http://www.burmalibrary.org/docs11/mlp10.10-op.pdf.
Who’s Who in Burma 1961. Rangoon: People’s Literature Committee and House.
 Who’s Who in Burma, 1961 (People’s Literature Commettee and House): 156. Dictionaries as well as Wikipedia give 1906 as his year of birth.
 Soe objected to the “Browderist line” named after the leader of the communist party of the United States who advocatedapeaceful development in – temporary – cooperation with ideological enemies.
 Nu’s government offeredareward of 1000.Kyat – an enormous sum at that time – for his capture – „dead or alive“. (Who’s Wo in Burma 1961: 156).
 Socialism (1938); Resistence ion Burma (1939); Labour World (1940). The first was published by the Nagani Book Club, the two others by the Myanmar Publishing House established in 1939 by Tun Aye,aco-founder of Nagani who – beingastaunch communist like Soe and Than Tun – left the publishing house because he regarded the issuing of shares supported by Nu too capitalist.
 The CIA inamemorandum of 1971 guessed that his armed group consisted of not more than 200-300 fighters (https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/esau-52.pdf: 2).
 Chit Hlaing 2008: 124.
Autor Hans-Bernd ZöllnerVeröffentlicht am 14. Juli 2018 26. April 2020 Kategorien Communism, Politics, SocialismSchreibe einen Kommentar zu Thakin Soe (1905-1989)